सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो डब्बु डान्स, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो डब्बु डान्स
डिसी नेपाल , १९ जेठ २०७५
रोचक । खुदगर्ज सन १९८७ मा रिलीज भएको एक सुपरहिट बलिउड चलचित्र हो । यसमा एउटा गीत छ- 'मै से मिना से ना साथी से' जसमा गोबिन्दा र नीलमले धमाकेदार डान्स प्रस्तुत गरेका छन् । यो चलचित्रलाई सुपरहिट बनाउन गोबिन्दा र नीलमबीच छायाँङकन गरिएको यो गीतले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको थियो ।
यो चलचित्रमा गोबिन्दा र नीलमको जोडीलाई अत्यधिक रुचाईएको थियो । यो गीत चलेसँगै यो जोडीले अन्य चलचित्रहरुमा पनि अभिनय गरेका थिए र यिनीहरु सन ८० को दसकको सफल जोडी ठहरिएका थिए । त्यस बेलाका सदाबहार गायक महम्द अजिज र साधना सरगमले गाएको यो गीत अहिले फेरी चर्चामा आएको छ ।
अनि यो गीत चर्चामा आउनुको कारण हो डब्बु अंकलले लगाएको ठूम्कामा अमेरिकी डान्सर दीप ब्रारले स्टेप कपि गर्नु । डब्बुले यो गीतमा दिएको स्टेपमा अहिले विश्वभरबाट उनको ठूम्काको चर्चा चलेको छ ।
आज डिसीनेपाल तपाईलाई उनै डब्बु र अमेरिकी डान्सरको ठुम्का देखाउँदै छ जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा रातारात भाइरल भइरहेको छ । हेर्नुहोस् यो गीतमा डब्बु र अमेरिकी डान्सरको शान्दार प्रस्तुती जुन अत्यन्तै रोमान्चक छ ।